Sunday May 21, 2017 - 11:38:57 in Wararka by Super Admin
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday Qasriga Boqortooyada Sacuudiga ayaa xaflad qoob ka ciyaar ah loogu sameeyay Trump iyo xaaskiiska, Fanaaniin Faasiqiin ah oo daacad u ah Nidaamka Aala Sacuud ayaa goobta kusoo bandhigay qoob ka ciyaar waxaana la arkayay Boqor Salmaan iyo Trump oo dhax bood boodaya goobta.
Koox Music-ga tunta oo katirsan shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa iyana goobta ku sugnaa, waxay aheyd munaasabad muujinaysa in ay walaaloobeen maamullada Aala Sacuud iyo Mareykanka!.
Sidoo kale Haweenayda Trump ayaa qeyb ka aheyd qoob ka cayaarka ay dowladda Sacuudiga u sameysay madaxweynaha Mareykanka wuxuu ahaa fuxshi iyo xummaan ay Aala Sacuud ku sameynaysay dhulka barakaysan ee Xarameynka.
Dhinaca kale Salmaan Bin C/Caziiz ayaa billad dahab ah guddoonsiiyay Hoggaamiyaha Mareykanka, sawirro goobta lagasoo qaaday waxaa kasoo muuqanayay Salmaan oo qoorta Trump gelinaya Billad dahab ah oo lacag mallaayiin dollar ah joogta!.
Hantida Sacuudigu kula saaxiibayo Trump waxaa baahi uga dhimanaya malaayiin qof muslimiin ah oo caalamka ku nool sida Yemen oo daris la ah sacuudiga waxaa halkaasi kajirta majaaco daran iyo cudurka shubanka oo ka dillaacay.
Cabdalla Bin C/Cazii Boqorkii Halaagsamay ee Sacuudiga ayaa sidaan oo kale sanaddii 2009 Billad Dahab ah uguddoonsiiyay Brack Obama Madaxweynihii Hore ee Mareykanka.